Indlu enhle yomqeqeshi e-Pilton - I-Airbnb
Indlu enhle yomqeqeshi e-Pilton
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Harriet
U-Harriet Ungumbungazi ovelele
Indlu enhle futhi elungiswe ngothando enkabeni yedolobhana lase-Pilton, ebekwe emagcekeni angasese ekhaya lethu lomndeni. Amakamelo amabili okulala amabili, elilodwa elinendawo yokugeza ephezulu (ukukhetha ukwengeza umbhede owengeziwe/indlwana yengane); igumbi leshawa; ikhishi elikhulu elivulekile, indawo yokudlela kanye negumbi lokuhlala, elinamasethi amabili eminyango ephindwe kabili eholela endaweni yokudlela yangaphandle yangasese (enendawo yokosa & umgodi womlilo); ukubuka nokusetshenziswa okuhlanganyelwayo kwe-paddock yethu nge-crow swing, umjikelo wengane kanye ne-trampoline yezingane.
Indlu yomqeqeshi iseduze nekhaya lethu lomndeni futhi izinsuku kusukela ngekhulu lokuqala lesishiyagalombili. I-acre paddock ezungezile inenqwaba yezihlahla ezinhle, kanye nendawo enkulu yokuzulazula. Sine-culvert, iphelele ngebhuloho le-Monet.
Isakhiwo silungiswe ngokucophelela, sigcina izici eziningi zasekuqaleni zinikeza ukunethezeka kwesimanje, futhi sinefenisha ecatshangelwe kahle ye-antique ne-baspoke. Sinikeza ilineni yekhwalithi yehhotela nezinto zombhede, njengoba zisetshenziswa amahhotela we-The Pig and Firmdale.
Ikhishi elimiswe kahle, eliphelele elinompheki omkhulu we-Rangemaster (elinama-hobs egesi/ama-oveni kagesi) kanye nefriji elikhulu/i-freezer, liholela eningizimu-ntshonalanga ebheke ithala, elilungele ukudla kwasehlobo. Ezinyangeni ezipholile, kunendawo enkulu yokunethezeka ngaphakathi futhi indawo yaphansi yefulegi inesilinganiso esiphezulu sokushisisa phansi.
Phezulu endlini, ngokuhambisana neminyaka yasekuqaleni yendlu, siphinde saqaphela, indawo yaphansi ye-okhi eqinile kuyo yonke indawo.
Indlu yomqeqeshi ine-Wi-Fi esheshayo, i-Smart TV nesipikha se-Bluetooth. Sinomshini wokuwasha nomshini wokomisa isisu futhi uma unezingane, singahlinzeka ngesihlalo esiphakeme, indlwana yokuhamba, i-crockery yezingane kanye nobhasikidi wamathoyizi nezincwadi. Itiye, ikhofi, amafutha omnqumo, ushukela, usawoti kanye nopelepele konke. Lapho ufika, kuzoba nepint yobisi oluphilayo (olungenabo ubisi uma uthanda) nesinkwa esisha. Uma ufuna uku-oda isitolo esiku-inthanethi esizolethwa ngaphambi kokuhlala kwakho, sizokubekela sona ngenjabulo.
Indlu yomqeqeshi isenhliziyweni ye-Pilton (indawo yomkhosi we-Glastonbury). Idolobhana elibukekayo linemvelaphi kusukela ngekhulu lokuqala, nesonto elihle lamandulo elinamathele egqumeni futhi libuyiselwe ngokuphelele inqolobane yekhulu lesine le-Tithe. Izindawo zasemaphandleni zinhle kakhulu futhi kukhona ukuhambahamba okuhle kwasendaweni ngaphakathi kwedolobhana ngokwalo, noma kude kakhulu (singanikeza amabalazwe nezeluleko!). Kukhona ipaki lokudlala, izindawo zokudlala kanye nepaki le-skate, elibheke isayithi yomkhosi. Uma uhambahamba epulazini elifanele nezingane, kukhona indlela yokuhambahamba esihlahleni, indawo yokulondoloza imvelo, umkhumbi omkhulu we-pirate kanye nesigodlo esiphinki sokudlala. I-Pilton ine-Co-op ewusizo, i-pub (i-The Crown) kanye nekilabhu yabantu abasebenzayo - kokubili ilungele isiphuzo. Uma unathi ngoLwesihlanu, idolobhana linenhlanzi & ama-chips amahle kakhulu anezinketho ezimnandi zabantu abangayidli inyama nemifino/abangayidli inyama. I-Shepton Mallet yidolobha lethu eliseduze (amamayela amabili) elinesikwele esihle semakethe, amathilomu amaningana nebhange lobuciko. Kukhona i-Tesco enkulu e-Shepton, i-Lindarose e-Wells nezimakethe ezinkulu kuwo womabili amadolobha ngoLwesine, ngoLwesihlanu nangeMigqibelo. Futhi nesitolo esinezinto eziningi epulazini e-Pylle eseduzane (Jon Thorners). Imizana ezungezile iyaziqhayisa ngezindawo ezinhle zokudla - i-The Sheppey in Godney, i-Talbot Inn e-Mells, i-Chapel e-Bruton, i-Roth Bar ne-Grill e-Hauser nase-Wirth (igalari enkulu yezobuciko yasendaweni & izingadi zokuvakashela), i-Newt (izingadi ezinhle) i-Lievetos e-Longington nokunye okuningi. Idolobha elihle lase-Wells lingamakhilomitha ayisikhombisa ushayela nesigodlo salo esihle kakhulu nesigodlo samaBhishobhi. I-Glastonbury Tor, i-Abey nedolobha ziseduze kakhulu futhi ziyakufanelekela ukuvakashelwa, njengamadolobhana ase-Bruton and Frome (imakethe emangalisayo ithatha lonke idolobha ngeSonto lokuqala lenyanga ngayinye). Ubhavu ongokomlando yimizuzu engu-35 uhamba ngemoto. Uma uya emcimbini endaweni yombukiso we-Bath and West, sisekude ngemizuzu eyishumi. Ezinye izindawo ezithakazelisayo zendawo: Umgodi we Wookey, u-Cheddar Gorge, ukucaca e-Burrington Combe, e-Longleat nase-Stourhead, ukusho okumbalwa. I-Dorset Coast yenza uhambo losuku olumnandi (ihora elilodwa nemizuzu eyishumi nanhlanu uhamba ngemoto) - i-Burtonradreon, i-Lyme Regis, i-West Bay. Kukhona umfula wokubhukuda eduzane e-West Lydford enhle kanye ne-Lido yangaphandle (engcono yezingane) e-Shepton Mallet.
I live in Somerset with my husband Gideon and our three children. We both work in the Arts; I am a cellist and Gideon is a set and costume designer.
Ngokuvamile sizoba seduze futhi sitholakale njalo ngocingo. Uma singatholakali sizoqinisekisa ukuthi umngane ukhona ukuze akusize uma kudingeka. Uma udinga noma yini, vele ubuze!
Uma ubhukha, sizothumela nge-imeyili yonke imininingwane edingekayo.
Izengezo ezingaba khona:
Kuye ngokutholakala kungase kube nenketho yesifundo se-yoga nothisha oqeqeshiwe ngokugcwele noma i-cello yemizuzu engamashumi amathathu ukuhambisana nesidlo sakho sakusihlwa (uHattie ungumculi ochwepheshile). Ngezinye izikhathi kuzoba nethuba lokubhukha isidlo sakusihlwa esiphekiwe ekhaya, ama-cocktail noma ijusi yesidlo sasekuseni esanda kwenziwa. Konke okungenhla kungaxoxwa uma ubhukha!
Ngokuvamile sizoba seduze futhi sitholakale njalo ngocingo. Uma singatholakali sizoqinisekisa ukuthi umngane ukhona ukuze akusize uma kudingeka. Uma udinga noma yini, vele ubuze…
UHarriet Ungumbungazi ovelele